Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ဒေသန္တရသတင်း > ဒုက္ခသည်အရေး UNHCR နှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ဆွေးနွေး
ဒုက္ခသည်အရေး UNHCR နှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ဆွေးနွေး	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	| အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၄၄ မိနစ်	စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်များ ပြန်ပို့ရေးနှင့် ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအား ထိရောက်စွာ အကူအညီ ပေးနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း ၅ ဖွဲ့အား ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့က UNHCR မှ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့သူ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးက ပြော သည်။“UNHCR က ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ရေး ကိစ္စကို တကယ်တန်း စိတ်ချတဲ့ အခြေအနေမှ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ ရှိတယ်။ အဲဒီလို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ နေရာမှာလည်း ထိုင်း၊ မြန်မာ အစိုးတို့နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သူတို့ ပြောသွားတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ် အပိုင်းကို ယေဘူယျလောက်ပဲဆွေးနွေးကြတာပါ။ တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ချက် အပိုင်းတွေတော့ ဆွေးနွေးကြခြင်း မရှိသေးပါဘူး” ဟု အစည်း အဝေး တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကရင်နီတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးအောင်ဆန်းမြင့် က ပြောသည်။UNHCR ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဗျူရို ဒါရိုက်တာ Mr. Kasidis Rochanakorn က ဦးဆောင်ပြီးဒေသ ကိုယ်စားလှယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်တို့ ပါဝင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးဖြင့် လာရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများဘက်မှ KNU, KNPP, NMSP, KIO, RCSS မှ ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦးနှင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် ကူညီရေးအဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် TBBC မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Mr. Jack Dunford ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦးပါ အဖွဲ့တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။TBBC မှ ၂ဝ၁၁ မတ်လ စာရင်းအရ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်း ၉ ခု၌
ဒုက္ခသည် ဦးရေပေါင်း ၁၄၃,ဝ၉၇ကျော် ရှိသည်။ သို့သော် အခြား အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များကမူ ဒုက္ခသည် တသိန်းခွဲမှ နှစ်သိန်းခန့်အထိ ရှိနိုင်သည် ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မေလလယ်ကလည်း ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sukumpol Suwanatat က ထိုင်း စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် Prayuth Chan-ocha နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာ ဒုက္ခသည်များအား နေရပ်ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ထိုင်းကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။ထို့အပြင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ၆ ကြိမ်မြောက် အာရှကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးများ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၌ ထိုင်းကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး Sukumpol Suwanatat နှင့် မြန်မာ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် လှမင်း တို့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ကလည်း အဆိုပါ မြန်မာဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ပို့ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှစ်ဦးအမြင်များဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ဇူလိုင် ၆ ရက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလဂျာနှင့် Colonel - Sin Wa တို့အား UNHCR မှ တနာရီခန့်ကြာ သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် UNHCR ၏ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ လမ်းကြောင်း အသစ်ဖြင့် ပေးပို့ကူညီနိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဒေါက်တာလဂျာ က ပြောသည်။“အကူအညီ ပေးရေးအတွက် အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ အဆင်ပြေဆုံးကတော့ တရုတ်ဘက်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ ကချင်ကို လာတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးကြတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကို ပီကင်း (တရုတ်)အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ်လို့ ပြောသွားတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။၂ဝ၁၁ ဇွန်လမှ စတင်ခဲ့သည့် KIO နှင့် အစိုးရတို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ခုနှစ်သောင်းခန့်အထိ တိုးပွားခဲ့သည်။ထို့ပြင် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ရှိ ရမ်လူးနှင့် လောင်ဖိုင်း ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်စခန်း ၂ အား ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့တွင် အပြီး ဖယ်ရှားပေးရန် တရုတ် အစိုးရမှ ဖိအားပေးခဲ့သော်လည်း ဒုက္ခသည်များမှ စုပေါင်း အသနားခံခဲ့ သဖြင့် ပြန်လည် နေထိုင်ခွင့် ပြုခဲ့သည်။ ရန်လူး စခန်းတွင် လူဦးရေ ၁,၄ဝဝ ကျော် နေထိုင်ပြီး လောင်ဖိုင်း စခန်းတွင် လူဦးရေ ၇ဝဝ ကျော်ခန့် နေထိုင်ကြောင်း သိရသည်။ကချင်နှင့် အစိုးရတို့ စစ်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာထိ UNHCR ၏ အကူအညီများ တကြိမ် သာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း၌မူ မြန်မာ အစိုးရ၏ အကန့်အသတ်များကြောင့် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်များ စတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာလဂျာ က ပြောသည်။UNHCR အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များက ယခုဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိထားသည့် အချက်အလက်များအား ကုလသမဂ္ဂ လူသား ချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးရုံး UNOCHA ၊ ကုလ ပညာရေးနှင့် ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ၊ ကုလ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR သို့ တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံမည် ဖြစ်ပြီး အကူအညီပေးရေး ကိစ္စများကို လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာလဂျာ က ပြောသည်။
OIC က ရိုဟင်ဂျာများ အခွင့်အရေး စဉ်စားဖို့ UNHCR ကို ပန်ကြား	ပင်လယ်ပြင် ဒုက္ခသည် ၄၀ ကို မလေးရှား လက်ခံလိုက်	ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် ကုလထောက်ပံ့လေယာဉ် ထွက်ခွါလာ	လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဖားကန့် ကျောင်းပိတ်လိုက်ရ	ကျားထိန်းသိမ်းရေး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းရန် သမ္မတ အိုဘားမားထံ ကချင်တောင်သူများ တောင်းဆို	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်စဉ် ဒေလီရှိ မြန်မာအချို့နှင့် တွေ့ရန်ရှိ	ပလောင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ စားနပ်ရိက္ခာ အရေးပေါ်လိုအပ်နေ	Who is Online
We have 53 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved